Mpamatsy Granulator Karazan-jiro voajanahary karazany mora vidy sy mpiorina | YiZheng
Inona ny karazana granulator zezika voajanahary karazana vaovao?
Granulator zezika biolojika karazana vaovao dia be mpampiasa amin'ny granulate ny zezika organika. Karazana granulator zezika biolojika vaovao, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe milina granulation goucheur sy masinina granitation ao anaty, no granulator zezika organika vaovao novolavolain'ny orinay. Ny masinina dia tsy vitan'ny hoe manangona karazana zavatra biolojika isan-karazany fotsiny, indrindra ho an'ireo fitaovana vita amin'ny fibre coarse izay sarotra ny hakana azy amin'ny fitaovana mahazatra, toy ny mololo, ny sisa tavela amin'ny divay, ny holatra, ny sisa tavela amin'ny zava-mahadomelina, ny tain-biby sns. Ny granulation dia azo atao aorian'ny fermentation, ary izy io koa dia mety hahitana ny vokatra tsara kokoa amin'ny fanaovana varimbazaha amin'ny asidra sy fotaka ao an-tanàna.
Aiza no ahazoana zezika biolojika?
Zezika voajanahary ara-barotra:
a) Fako indostrialy: toy ny voamadilo, ny vinaingitra, ny mangahazo, ny residu-siramamy, ny sisa tavela amin'ny volom-borona, sns.
b) fotam-bolan'ny tanàna: toy ny fotaka renirano, fotaka maloto, sns. Famokarana akora simika voajanahary sy fanasokajiana ny fotony: fasika silkworm, residue holatra, residu kelp, residu asidra phosphocitric, reside mangahazo, fotaka proteinina, residue glucuronide, humic acid amino asidra, solika solika, ahitra ahitra, vovoka akorandriaka, miasa miaraka, vovoka voanjo, sns.
a) Fako fambolena: toy ny mololo, sakafo soja, sakafo landihazo sns.
b) zezika fiompiana sy akoho amam-borona: toy ny zezika akoho, omby, zezika ondry sy soavaly, zezika bitro;
c) Fako ao an-trano: toy ny fako ao an-dakozia;
Fitsipika momba ny asan'ny Granulator zezika voajanahary karazana vaovao
ny granulator zezika organika karazana vaovao mampiasa ny hery manetsika mekanika ny fihodinan'ny hafainganam-pandeha sy ny aerodinamika vokatr'izany mba hifangaro, granulate, spherical, matevina ary dingana hafa amin'ny vovoka tsara ao anaty milina, mba hahatratrarana ny granulation. Ny bikan'ny sombin-javatra dia boribory, ny haben'ny sombintsombiny dia eo anelanelan'ny 1.5 sy 4 mm, ary ny sombintsombin'ny 2 ~ 4.5mm dia -90%. Ny savaivony potika dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ara-nofo sy ny hafainganam-pandehan'ny fody. Matetika, arakaraka ny maha-ambany ny fangaro mifangaro no mahabe ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana, ny kelikely kokoa ary ny sombiny lehibe kokoa.
Endri-javatra an'ny New Type Organic Fertilizer Granulator
►Ny granule vokatra dia baolina boribory.
►Ny atiny biolojika dia mety hahatratra hatramin'ny 100%, hahatonga granulate organika madio.
►Ny poti-javatra ara-nofo dia mety hitombo amin'ny hery iray, tsy mila manampy binder. rehefa granulate.
►Ny granula vokatra dia massy, ​​afaka manala mivantana izy aorian'ny granulation hampihenana ny angovo. fihinanana fanamainana.
►Rehefa tsy mila maina ny taovolo fanamasinana dia afaka miditra ny hamandoan'ny akora 20% -40%.
Teknolojia famokarana zezika voajanahary voajanahary
Mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny zezika biolojika marobe, WE Zhengzhou Yizheng Heavy Machines Co., Ltd. mamolavola sy manamboatra ny tsipika famokarana zezika biolojika sy ny milina mifandraika mifanaraka amin'ny akora biolojika samihafa, izay nanjary mpitarika tany an-tsaha tany Sina.
Famoahana isan-taona ny zavamaniry zezika bitika kely (300 andro fiasana)
10.000 taonina / taona
20 000 taonina / taona
30.000 taonina / taona
1,4 taonina / ora
2,8 taonina / ora
4,2 taonina / ora
Famoahana isan-taona ny zavamaniry zezika voajanahary
50.000 taonina / taona 60.000 taonina / taona 70.000 taonina / taona 80.000 taonina / taona 90.000 taonina / taona 100 000 taonina / taona
6,9 taonina / ora 8,3 taonina / ora 9,7 taonina / ora 11 taonina / ora 12,5 taonina / ora 13,8 taonina / ora
Famoahana isan-taona ny zavamaniry zezika voajanahary lehibe
150.000 taonina / taona 200.000 taonina / taona 250.000 taonina / taona 300.000 taonina / taona
20,8 taonina / ora 27,7 taonina / ora 34,7 taonina / ora 41,6 taonina / ora
Afaka amin'ny famerana vanim-potoana sy ambany ambany dia lafo ny fanamasinana Aerobika
"Avadiho ho harena ny fako", tsy misy fitsaboana maloto, fitsaboana tsy mampidi-doza
Sfihodinan'ny famokarana hort ny zezika organika
Smiasa sy fitantanana mety
Fomba fiasa amin'ny tsipika famokarana zezika voajanahary
Ny fermentation no dingana fototra amin'ny famokarana. Mila voafehy tsara ny hamandoana, ny mari-pana ary ny fotoana. Ny compost turner dia ny masira zezika biolojika ampiasaina mba hanafainganana ny fanangonana ny zavamiaina bitika sy hanatsarana ny kalitaon'ny zezika.
Ireo potipoti-kazo dia tokony hokapohina aorian'ny fizotran'ny fermentation. Sarotra ny manamboatra an'io olana io ho lasa granules amin'ny tanana. Amin'izany fomba izany dia ilaina ny mampiasa crusher zezika. Manoro hevitra ny mpanjifa izahay hisafidy milina crusher fitaovana hamandoana avo, satria afaka manorotoro akora semi-mando sy mahomby amin'ny famotehana.
Io no fizotry ny famokarana manan-danja amin'ny tsipika famokarana iray manontolo. Araka ny fitakiana isan-karazany dia azo ampiana otrikaina. Ny tsiranoka spherika dia voahodina, mitahiry angovo be dia be. Noho izany, ny fisafidianana ny masinina zezika biolojika mety indrindra. Ny granulator zezika biolojika karazana vaovao no milina mety indrindra.
Aorian'ny famolahana dia mila fanamainana ireo granula. Ny hamandoan'ny zezika biolojika dia ahena ho 10% -40%. Ny milina fantsona Rotary dia fitaovana hampihenana ny hamandoan'ny sombintsombiny, izay azo atao amin'ny famokarana zezika organika.
Mba hahazoana antoka ny kalitao, ny sombintsombiny dia tokony ho mangatsiaka aorian'ny fanamainana miaraka amin'ny fanampian'ny milina fanamainana amponga.
Misy zezika biolojika tsy voamarina mandritra ny famokarana. Mila milina fitiliana zezika amponga Rotary hampisaraka ireo entana nolavina sy ny akora mahazatra.
Masinina fonosana zezika dia ampiasaina amin'ny famonosana zezika voahodina. Azontsika atao ny mampiasa milina famonosana entana sy paosy kitapo. Afaka mahatratra vokatra mandeha ho azy sy mahomby izy io.
Fampisehoana horonantsary voajanahary voajanahary karazana vaovao
Safidy modely karazana zezika voajanahary karazana vaovao
Ny maodely famaritana granulator dia 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 ary ny famaritana hafa, izay azo namboarina ihany koa mifanaraka amin'ny tena filàna.
Refy (L × W × H) (mm)
Teo aloha: Roll Extrusion Compound Fertilizer Granulator
Manaraka: Rotary Drum Compound Fertilizer Granulator
Rotary Single Silinder fanamainana milina amin'ny volo ...
Fampidirana Inona ny masinina fanamainana varingarina volo Rotary? Ny Rotary Single Cylinder Machine fanamainana dia milina fanamboarana lehibe ampiasaina hanamainana ny zezika zezika amin'ny indostrian'ny fanaovana zezika. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana ilaina. Ny milina fanamainana varingarin'ny Rotary tokana dia ny fanamainana zezika zezika organika miaraka amin'ny ...